चिनजानकै साथी थिए प्रहरी र प्रशान्त, एकले अर्कालाई ‘झुक्याउँदा झुक्याउँदै’ मारिए दुबै « Naya Page
चिनजानकै साथी थिए प्रहरी र प्रशान्त, एकले अर्कालाई ‘झुक्याउँदा झुक्याउँदै’ मारिए दुबै
प्रकाशित मिति : 10 July, 2019 8:47 pm
काठमाडौं, २५ असार : भोजपुर सदरमुकामस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट करीब ५ सय मिटर तल मात्रै पर्छ, हटिया । शनिबार र बुधबार लाग्ने यो हटियामा मुलतः तरकारीको व्यापार हुने गर्छ । बुधबार बिहानैदेखि भोजपुर सदरमुकाममा बाक्लो असारे झरी परिरहेको थियो । बाक्लो कुहिरो लागेको थियो । झरीको कारण बजारबासीहरु बजार झरेका थिएनन् । व्यापारीहरु मात्रै ओतिएर बसिरहेका थिए, बजारका साना छाप्राहरुमा ।
बिहान करीब ८ बजेतिर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा खबर खायो, ‘हटियाको पाँचघरे होटलमा विप्लवका नेता तथा कार्यकर्ताहरु बसिरहेका छन् ।’ त्यो खबर सही थियो । हटियाको पश्चिमतर्फ बसपार्क अघिको होटलमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ का ओखलढुङ्गा जिल्ला इञ्जार्ज नीरकुमार राई ‘प्रशान्त’ लगायतका विप्लवका कार्यकर्ताहरु थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा यो खबर गर्ने अरु कोही नभएर भोजपुरमा विप्लव समूहको गतिबिधि बारेमा जानकार घुमुवा प्रहरी जवान सञ्जीव राई थिए । विप्लवका कार्यकर्ताहरु होटलमा रहेको जानकारी पाए लगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सादा पोसाकमा प्रहरीहरु खटाइए । प्रहरीहरु खेमनाथ भट्टराई, सुरेन्द्र माझीलगायतका प्रहरी टोली बसपार्क पाँचघरे होटल पुग्यो ।
साथी थिए, एकले अर्कालाई ‘झुक्याउँदा झुक्याउँदै’ मारिए दुबै
त्यसो उनीहरु परिचित मात्रै होइन साथी पनि थिए । प्रहरीमा भर्ना हुन अघिसम्म सन्जिव पनि माओवादी आन्दोलनसँग सामिप्य राख्ने मान्छे थिए । प्रशान्त त माओवादी जनयुद्धका कम्पनी कमाण्डर ।
स्थानीय र प्रत्यक्षदर्शीहरुलाई उधृत गर्दै स्थानीय पत्रकार बुद्ध तामाङ्गले जानकारी दिए अनुसार प्रहरी जवान सञ्जिव ‘मर्निङ्ग वाक’मा निस्किएका थिए । ‘मर्निङ्ग वाक’मा निस्किएका राईलाई विप्लव समूहका इञ्चार्ज ‘प्रशान्त’ले भोजपुर बजारको बैंक रोडदेखि नै पिछा गरेका थिए ।
हटियानिर पुग्दा प्रहरी जवान राईले पनि विप्लव समूहका इञ्चार्ज ‘प्रशान्त’ले पिछा गरेको थाहा पाए । र, त्यही उभिए । दुबै जनाको भेट भयो । उनीहरु पुरानै चिनजानका थिए । प्रशान्तलाई प्रहरी जवान राईले चिया खान जाने प्रस्ताव राखे । दुबै पाँचधरे होटलमा छिरे ।
होटलमा बस्ने ठाउँमा पर्दा लगाएर कुराकानी सुरु भयो । जवान राईलाई प्रशान्तले भन्दै थिए ‘मेरो पिछा कति गर्छौं ? मलाई पिछा गर्न छोडीदेऊ ।’ होटल सञ्चालकलाई उधृत गर्दै स्थानीय पत्रकार तामाङ भन्छन्,‘उनीहरु मिल्ने साथी जसरी कुरो गरीरहेका थिए ।’
कुराकानीकै बिचमा विप्लव समूहका इञ्चार्ज ‘प्रशान्त’लाई शंका लाग्यो,‘कतै मलाई पक्रिन त खोज्दै छैन ?’ उनी पिसाव फेर्न जान्छु भन्दै भाग्न खोजे । तर प्रहरी जवान राईले भने ‘तपाई नजानोस् मैले साथीहरु बोलाएको छु ।’ प्रहरी जवान राईले त्यसबेलासम्म प्रशान्तलाई पक्राउ गर्ने योजना अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट टोली झिकाउन भ्याइसकेका थिए । प्रहरी जवान राई झुक्काएर नियन्त्रणमा लिन खोजिरहेका थिए भने प्रशान्त उनलाई छलेर भाग्न खोजिरहेका थिए ।
प्रहरी आउँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि प्रशान्तले भाग्ने प्रयास गरे । प्रहरी जवान राईले प्रशान्तलाई झम्टिएर पक्रिए । नियन्त्रणमा लिन खोज्दा दोहोरो धक्कामुक्का शुरु भयो । त्यहीबिचमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएका टोली पनि आइपुग्यो ।
प्रहरीका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट आएका सादा पोशाकका प्रहरी आएको देखे लगत्तै आत्तिएका प्रशान्तले प्रहरी जवान राईमाथि गोली प्रहार गरीहाले । गोली लागेका प्रहरी जवान राई होटलको दराजमा ठोक्किएपछि ढलफलिदै सडकमा गएर ढले । करिब बिहान ८ बजेर ४५ मिनेटमा गोली चलेको थियो ।
विप्लव नेता प्रशान्तले गोली प्रहरी जवान राईलाई गोली प्रहार गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटि आएको टोलीले जवाफी फायरमा गरे । प्रशान्तलाई पनि गोली लाग्यो । तर, विप्लव समूहले भने प्रहरी जवान राई र विप्लवका इन्चार्ज प्रशान्तबीच दोहोरो धक्कामुक्का भइरहेको बेला प्रहरी कार्यालयबाट आएको टोलीले गोली प्रहार गर्दा दुबै जना मारिएको दाबी गरेको छ ।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार गोली लागेर ढलेर गाडीमा हाल्ने बेलासम्म प्रशान्त भने जिवित थिए । रगताम्मे भएर लडिरहेका प्रशान्तले भनिरहेका थिए,‘मलाई गाह्रो भयो नलैजा ।’ तर जिल्ला अस्पताल भोजपुरले लैजान साथ मृत घोषणा गरेको थियो । स्रोतका अनुसार अत्याधिक रक्तस्राब भएर उनको बाटैमा ज्यान गएको हो । जिल्ला अस्पताल र घटनास्थल डेढ एक किलोमिटरको दूरीमा छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडाले विप्वलका कार्यकर्ताहरुले प्रहरी जवानमाथि गोली चलाएपछि प्रहरीले जवाफी फायर गरेको बताएका छन् । भोजपुरका प्रहरी प्रमुख डिएसपी नरबहादुर सलामी मगरले विप्लवका कार्यकर्ताहरुले प्रहरीमाथि गोली चलाएपछि प्रहरीले जवाफी कारबाही गरेको बताए ।
नीरकुमार राईको साथबाट एक थान चिनियाँ पेस्तोल, ६ राउण्ड गोली र सोही पेस्तोलको म्याग्जिन बरामद गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी खतिवडा र प्रहरीले भने प्रहरी जवान राईलाई विप्वलका नेता प्रशान्तले गोली हानेको दाबी गरेका छन् । तर, विप्लव समूहले भने प्रशान्त र प्रहरी जवान दुबै प्रहरीकै गोलीबाट मारिएको दाबी गरेका छन् ।
को हुन् ‘प्रशान्त’ ?
माइक समाएर बोल्दै प्रशान्त । तस्बिर : सामाजिक सञ्जाल
भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका–१३ साबिकको बोया गाविसका नीरकुमार माओवादीका पुराना नेता हुन् । उनी तात्कालीन नेकपा माओवादी जनयुद्धमा माओवादी जनसेनाका कमाण्डर थिए ।
षडानन्द नगरपालिका–१३ बोयास्थित महेन्द्रोदय माविबाट एसएलसी पास गरेपछि २०५८ सालमा भूमिगत भएका थिए ।
तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा भोजपुर वोयाका दर्जनौं कमाण्डरहरु थिए । विप्लव माओवादीका तत्कालीन पोलिटव्युरो सदस्य पदम राई, पूर्व सांसद किरण राई, हालका विप्लव केन्द्रीय सदस्य दिपेश राईलगायतका नेताहरु उनै नीरकुमार राईका गाउँका हुन् । उनी माओवादी जनयुद्धमा समेत कम्पनी कमाण्डर थिए । उनी पूर्व माओवादी निकट अखिल क्रान्किारीका केन्द्रीय सदस्य भएका थिए ।
माओवादी विभाजित भएपछि उनी मोहन वैद्य ‘करण’ समूह तिर लागेका थिए । तर, वैद्य नेतृत्वको पार्टी फेरि फुटेपछि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामा लागे । पछिल्लो समय उनी ओखलढुङ्गाको इन्चार्ज बनेका थिए ।
श्रीमती भेट्न जाँदा मारिए
उनलाई चिन्नेहरुका अनुसार उनी केही दिनयता भोजपुर सदरमुकामतिरै घुमिरहेका थिए । भोजपुर धोदलेखानी विहे गरेका राईकी श्रीमती भोजपुरमा बस्दै आएकी थिइन् । साथीभाइलाई भेट्दा पनि राईले श्रीमती भेट्न आएको केही दिनपछि फर्किने बताएका थिए । बसपार्कलाई केन्द्र बनाएर उनले भोजपुर बजारमा गतिबिधि गरीरहेका थिए ।
सांसद सुदन किरातीका सुरक्षा गार्ड थिए, जवान सञ्जीव
प्रहरी जवान राई
प्रहरी जवान राई भोजपुरका सांसद सुदन किराती जिल्ला गएको बेला सुरक्षागार्डको रुपमा खटिने गरेका थिए । सादा पोसाकमा घुमुवा समूहमा काम गर्ने जवान राई मिलनसार र सहयोगी थिए ।
निर्वाचन ताका सांसद किरातीसँगै हिडेका थिए, प्रहरी जवान राई । सांसद किरातीले भने,‘उनी असाध्यै मिलनसार र असल थिए । भोजपुर गएको बेला मसँगै हिड्थे ।’ त्यसो प्रशान्त पनि सांसद किरातीका कुनै समयका सहयोद्धा नै थिए ।
खोटाङ च्यास्मीटार स्थायी घर भएका प्रहरी जवान राई संखुवासभाको सिलिचुङमा प्रहरी र विप्लवबीच भएको दोहोरो भिडन्तपछि मात्रै भोजपुर आएका थिए । उनका दुई छोरा र श्रीमती छन् । उनले केही समयअघि मात्रै छोराहरुलाई पढाउनको निम्ती धरान लगेका थिए । उनका नजिकका साथीभाईका अनुसार छोराको भबिष्य बारेमा उनी चिन्तित थिए । उनले भन्ने गरेका थिए,‘यिनिहरुलाई चै देशको गतिलो मान्छे बनाउने हो ।’
भोजपुरमा तीन जना मारिए
गत जेठ ७ गते ट्याम्के–मैयुङ गाउँपालिकाको धोद्रे जङ्गलमा प्रहरीको गोली लागेर भोजपुरकै कुदाककाउलेका तीर्थराज घिमिरे ‘राजु’ मारिएका थिए । बुधबारको घटनासँगै विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि मारिनेको संख्या तीन पुगेको छ ।
यसअघि विप्लवका कार्यकर्ताहरुले असार १८ गते ट्याम्के–मैयुङ–१ को वडा कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड समेत गरेका थिए ।
महानिरीक्षक खनाल भन्छन्, ‘जवाफी फायर’
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले जवाफी फायरमा नीरकुमार राई मारिएको बताएका छन् । बुधबार भोजपुरमा भएको गोलीकाण्डबारे प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा जवाफी फायरमा विप्लव समूहका नेता मारिएको जानकारी दिए ।
भने, ‘प्रहरी जवान सञ्जीव राईको छातीमा गोली लाग्यो र उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा प्रहरीबाट जवाफी फायर हुँदा विप्लव समूहका ओखलढुङ्गा इञ्चार्ज नीरकुमार राईलाई पनि गोली लाग्न पुग्यो,।’
घटनामा प्रहरी जवान थमनाथ भट्टराईको काँधमा गोली लागेको समेत खनालले जानकारी दिए । उनले सो क्रममा ठूलो चाइनिज पेस्तोल एक थान, त्यसको म्याग्जिन एक थान र उक्त पेस्तोलमा लाग्ने छ राउण्ड गोली बरामद भएको पनि उनले बताए ।
(भोजपुरका स्थानीय पत्रकार बुद्ध तामाङको सहयोगमा)
दुई पत्रकारसहित पर्साका ४३ जना कोरोनालाई जित्दै घर फर्किए
‘निरोगी नेपाल निर्माण’ का लागि प्रधानमन्त्रीले दिए यस्ता पाँच ‘टिप्स’
कोरोनाको मारमा परेका निजी क्षेत्रका लागि सरकारले राहत प्याकेज ल्याउने
अब हङकङबाट पनि सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको बिप्रेषण सेवा
पर्सा, १२ जेठ । नेपालमा कोरोना संक्रमित थपिने क्रमसँगै केहि दिनयता ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित
काठमाडौं, १२ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘निरोगी नेपाल निर्माण’ का लागि पाँच काम
काठमाडौं, १२ जेठ । कोरोना महामारीका कारण जारी लकडाउनका कारण समस्यामा परेका निजी क्षेत्रका लागि
राजधानीमा पाँचसहित थपिए २७ नयाँ कोरोना संक्रमित, कहाँ कति ?
प्रेम विवाह गरेकी पत्नीले नै लिइन् परपुरुषसँग मिलेर श्रीमानको ज्यान, हत्यामा यस्तो ‘चलाकी’